Laga soo bilaabo Reddit & Quora: Su'aalaha 12 (Dood kulul) oo ku saabsan NMN - AASraw
/blog/Gallery/Laga soo bilaabo Reddit & Quora: 12 Su'aalo (Dood kulul) oo ku saabsan NMN
Posted on 08 / 19 / 2021 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Waa maxay NMN Powder?
Maxay NAD+ ku leedahay NMN?
Ma yahay NMN Powder Safe Supplements?
Faa'iidooyin noocee ah ayay NMN Powder ku keeni kartaa Jidhkayga?
Miyaan Ka Heli Karaa NMN Cuntada Ilaa Ka-hortagga Gabowga?
Sida Loo Qaato NMN Powder?
Miyaan ku qaataa NMN kaabayaal kale?
NMN Wanaagsan Ma u Tahay Ka-hortagga COVID-2019?
NMN VS. NR: Kee baa fiican?
Sideen ku heli karaa budada NMN ee ugu Fiican?
Sidee Loo Kaydiyaa NMN Powder?
Ma jiraan dib -u -eegis dhab ah oo ku saabsan budada NMN?
Sidaan wada ognahay, waxyaabaha ka hortagga gabowga waa mowduuc joogto ah dad badanna waxay bartaan goobtan muddo dheer, 2018, waxaa jira dawooyin cusub oo loogu talagalay kahortagga gabowga waxayna sababtay jaahwareer ku saabsan alaabada gabowga, alaabtan cusub ee loo yaqaan “ NMN ”. NMN (β-Nicotinamide Mononucleotide) oo ah nooc cusub oo kaabisyada gabowga ah ayaa aad loo jecel yahay. Qaadashada kaabayaasha NMN ama ku dar qaar ka mid ah budada NMN quraacda waa wax caadi ah oo la arkay tan iyo 2020. Macluumaad noocee ah ayay tahay inaan ka ogaano NMN iyo sida looga iibsado budada NMN onlayn, dhammaan su'aalaha ayaa ka welwelsan inta badan dadka diyaar u ah inay isticmaalaan budada NMN ama kaabis. Maanta, waxaan ka soo aruurinay mowduucyada looga dooday khadka tooska ah reddit iyo quora NMN, waxaan rajeyneynaa in jawaabahani ay kaa caawin karaan inaad ogaato NMN oo aad ka iibsato budada NMN ee dhabta ah khadka tooska ah.
NMN waxay u gaaban tahay nicotinamide mononucleotide (CAS: 1094-61-7), oo ah molecule dabiici ah oo ku jira dhammaan noocyada. Heerka moodeelka, waa ribonucleotide, oo ah unug dhisme aasaasi ah oo ah RNA nucleic acid. Qaab ahaan waxay ka kooban tahay koox nicotinamide ah, ribose iyo kooxda fosfate. NMN waa fiitamiin B3 (niacin). Waxay u dhacdaa si dabiici ah waxaana laga samayn karaa ilaha cuntada sida miraha, caanaha, iyo khudaarta. Jidhka dhexdiisa, NMN waxaa loo isticmaalaa in lagu dhaliyo nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+), oo ah molecule awood leh oo lama huraan ah oo laga helo unug kasta oo jirka ah. Marka, Qaadashada budada NMN waa hal dariiqo oo heerarka NAD+ ee unugga lagu kordhin karo, ka dibna la gaaro ujeeddada ka-hortagga gabowga.
Hadda, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu soo saaro alaabada ceyriinka ah ee NMN ee warshadda, oo sidoo kale loo yaqaan budada NMN. Ilaa inta aan ogahay, waxaan ka aqaanay 2 dariiqo warshad soo saarta budada NMN:
Habka 1 ee loogu talagalay soosaarka budada NMN: Habka wax kiciya (Fasalka Warshadaha)
Badeecaddan la soo saaray oo keliya isticmaalka falcelinta kiimikada Warshadaha, oo aan ku habboonayn aadanaha, uma baahna inay ogaadaan biraha culus, tilmaamaha microbiological gudaha budada, waa khatar.
Habka 2 ee soosaarka budada NMN: Habka Enzymatic (Fasalka Cuntada)
Qaabkan, budada NMN waxay badbaado u tahay dadka adeegsada, oo ma laha wax Reagent ah, xitaa waxay adeegsataa habka caadiga ah ee dibadda si ay u tijaabiso tayada, natiijadu wali kama yaraan 98% daahir. (waxaa jira badeecooyin si fudud u qallajin kara dareeraha hooyada si aad u hesho budo, oo u isticmaal habka HPLC si aad u tijaabiso daahirsanaanta, sidoo kale kama yara 98%, laakiin marka ay adeegsato habka caadiga ah ee dibadda si loo cabbiro, markaa farqiga ayaa cad .
AASraw waa warshad soo saare si ay u soo saarto budada NMN ee dalka Shiinaha habka aan u adeegsanayna waa habka enzymatic, dufcad kasta oo budada NMN ah ayaa la tijaabin doonaa ka hor intaan la iibin oo daahirnimadu waxay muujineysaa 99% min, tayada ayaa deggan. Waxaan heshiisyo la galnay dhowr shirkadood oo dheellitiran oo waaweyn waxaanna siinnay budada NMN muddo dheer. Shaki kuma jiro in habka Enzymatic uu u yahay xulasho wanaagsan warshadaha badankooda. Marka, fadlan tan ku xaqiiji bixiyahaaga budada NMN ee adiga ka hor iibso NMN badan budada.
NAD waxay u taagan tahay nicotinamide adenine dinucleotide. Laga soo bilaabo bakteeriyada ilaa duurjoogta, waa mid ka mid ah maaddooyinka ugu badan uguna muhiimsan ee dheef -shiid kiimikaadka gacanta. Si kale, jidh kastaa wuxuu leeyahay walax NAD, waxaan u badan nahay inaan ku dhimanno 30 ilbidhiqsiyo la'aan NAD+. Taasi waxay noo sheegaysaa NAD+ waa walax aad muhiim ugu ah jidhkeenna, waxay u taageeri kartaa shaqada jidhkeenna sida caadiga ah maalin kasta.
NAD+ wuxuu u shaqeeyaa sida baska maraakiibta, isaga oo u wareejinaya elektaroonada hal molecule gacanta oo kale. Nidaamyadan aad bay muhiim u yihiin Hawlaha kale ee NAD+ waxaa ka mid ah nidaaminta wareegga hurdada/toosinta. NAD+ wuxuu wadaa sirtuins si loo habeeyo dheef -shiid kiimikaadka loona ilaaliyo koromosoomyada deggan. Molekuulku wuxuu kaloo ka caawiyaa hagaajinta DNA -da waxyeelloobay.
Marka, aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo heerka NAD+ ee jirkeena. Taasi waxay sidoo kale noo sheegtay inaan sii yaraano annagoo kordhinayna heerka NAD+, naga caawiya inaan la dagaallano gabowga. Markaa maxay tahay inaan kor u qaadno heerkayaga NAD+?
Sida saynisyahannadu sheegeen, waxaa jira saddex dariiqo oo lagu kordhiyo heerka NAD+:
Nidaamka cuntada ee la isku hagaajiyay. Cuntooyinka dufanka ku badan iyo karbohaydraytyadu ku yar yihiin, sida keto ama cuntada nooca Atkins, waxay kor u qaadaan xaaladda ketosis. Marka jirkaagu ku jiro ketosis, waxaad u isticmaashaa baruur tamar halkii aad ka isticmaali lahayd gulukoos. Farsamadani waxay kordhisaa saamiga NAD+ ilaa NADH, taas oo jirkaaga ka ilaalinaysa oksaydhka.
NAD+ Kordhin. Jidhkaagu wuxuu leeyahay awood xadidan oo uu ku soo saaro NAD+, sidaa darteed ka helidda ka -soo -saare sumcad leh oo bixiya dammaanad -daahir waa hab aan xanuun lahayn si kor loogu qaado heerarkan jirkaaga. Kaabayaashaan waxaa ka mid ah nicotinamide, nicotinic acid, nicotinamide mononucleotide (NMN), iyo nicotinamide riboside (NR). 【Nicotinic acid wuxuu u beddelaa NAD+ saddex tallaabo. Tallaabada ugu horreysa, enzyme -ka NAPRT wuxuu u beddelaa nicotinic acid nicotinic acid mononucleotide (NAMN). Tallaabada labaad, enzyme -ka, NMNAT, wuxuu NAMN u beddelaa nicotinic acid adenine dinucleotide (NAAD). Enzyme -ka, NAD+ synthetase (NADS) ayaa markaa NAAD u beddelaya NAD+. NAD+ biosynthesis ee dariiqa badbaadinta waxaa ka mid ah u -beddelka nicotinamide ee NMN iyada oo loo marayo enzyme, fosfoorbosyltransferase, NMNAT. Enzymeku wuxuu NMN u beddelaa NAD+.】
Ku celcelinta soonka goos gooska ah. In kasta oo xaddidaadda kaloriinta daran ama muddada dheer ee soonka aan lagu talinayn dadka waaweyn badankooda, soonka kooban ama aan kala go ’lahayn ayaa muujin kara natiijooyin isku mid ah. Soonka goos gooska ah waa hab sii waara oo jirkaaga loogu soo bandhigo waqtiyo dheer iyadoo aan la cunin, kor loogu qaado heerarkaaga NAD+ si la mid ah sida ketosis.
Nasiib darrose, waxaa laga yaabaa inaan lagugu talinin dufanka badan haddii aad qabto sonkorow, wadne xanuun, ama kolestaroolka LDL oo kordhay. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in soonku aan lagu talinayn kuwa qaba xaalado caafimaad oo badanaaba way adag tahay in la sii wado waqti ka dib. Markaa, kaabayaasha budada NMN ama wax kale Kordhinta NAD badiyaa waa habka ugu nabdoon uguna habboon ee lagu hormarin karo wax soo saarka kordhay ee NAD.
Ka dib markaan ogaanno NAD+ iyo sida ay u shaqeyso, waxaan filayaa inay tahay inaad ogaato sababta aan ugu baahan nahay inaan qaadno budada NMN? Sidee bay u shaqaysaa marka budada NMN jirkeena gasho. Si sahal ah, NMN waa horudhaca NAD+ ka hor intaadan gelin jirkeena. Qaadashada budada NMN waxay kordhin kartaa heerka NAD+ waxayna naga caawineysaa inaan garaacno xawaaraha gabowga.
Xogta ugu badan ilaa hadda waxay ka timid xayawaanka, kuwaas oo aan muujin wax saameyn ah. Daraasadda jiirka ee muddada dheer sidoo kale ma muujin sumoobo, waxyeellooyin daran, ama heerka dhimashada oo kordhay muddadii dhexgalka 12 bilood. Ilaa inta aan ognahay, Tijaabo bani’aadam ayaa dhawaan laga sameeyay Japan. Ujeedada maxkamaddu waxay ahayd in la go'aamiyo haddii budada NMN ay nabdoon tahay in la qaato. NMN waxaa loo maamulay 10 nin oo caafimaad qaba. Qiyaasaha 100, 250, iyo 500 mg NMN ayaa la siiyay. Maamullada keli ah ee afka ah ee NMN ma aysan keenin wax calaamado caafimaad oo muhiim ah ama isbeddel ku yimid biomarkers -ka sida garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga, buuxinta oksijiinta, iyo heerkulka jirka. Maxkamadeynta ayaa gacan ka geysaneysa xaqiijinta in, guud ahaan, budada NMN ay tahay mid nabdoon oo si wanaagsan loo dulqaatay; si taas loo gaaro, maxkamadaynta waxaa loo tixgelin karaa guul. Daraasadani waxay sidoo kale cabbirtay tayada hurdada, mana helin kala duwanaansho ka hor iyo ka dib isticmaalka NMN.
Sababtoo ah tirada kooban ee tijaabooyinka aadanaha, saynisyahannadu waxay sii wadaan inay sahamiyaan waxyeelada NMN, iyagoo ku dadaalaya inay helaan xog caafimaad oo dheeri ah tijaabooyinka aadanaha, si loo hubiyo in badeecadan cusub ee kahortagga gabowga si rasmi ah loo bilaabay.
Isla mar ahaantaana, waa inaan ka hadalnaa Dr. David Sinclair oo ka mid ah 100 -ka qof ee ugu saamaynta badan adduunka majaladda Time Magazine, ayaa sanado badan qaadanayay kaabayaasha NMN saaxiibbadii ku jiray warshadaha gaboobay. Waxa uu nala wadaagay waayo -aragnimada ka dib markii uu qaatay budada NMN muddo dheer. Wuxuu yiri: “Had iyo jeer waxaan qaataa 1 garaam oo NMN maalin kasta, oo ay weheliso kaabisyo kale oo ay ku jiraan resveratrol, metformin, iyo aspirin. Ma aanan la kulmin wax aan ka ahayn calool -xanuun ilaa hadda. ” Wuxuu kaloo xusuusiyay inay tahay inaan ku hayno budada NMN jawi qabow ama sida ugu fiican qaboojiyaha, maxaa yeelay NMN waxay hoos u dhigtaa Nicotinamide jirkaaga marka NMN lagu keydiyo heerkul kulul/diiran.
NMN (Nicotinamide Mononuleotide) waa horudhaca dabiiciga ah ee NAD+. Kordhinta NMN waxay kor u qaadeysaa DAN+ caafimaadka lagama maarmaanka ah & cimriga dheer ee ka mid ah bixinta faa'iidooyinka kale ee caafimaadka.Budhitaanka NMN wuxuu ku jiraa marxaladaha hore ee tijaabooyinka aadanaha iyo sheegashooyinka faa'idooyinka hadda jira waxay ku guuleysteen barashada xayawaanka. Illaa iyo hadda, ma jiraan wax caddeyn ah oo ah waxyeello soo gaarta, xitaa qaddarro sarreeya muddo dheer. Waxa kale oo ay muujisay faa'iidooyin caafimaad xaaladaha Sonkorowga Nooca II iyo Cudurka AlzheimerHoos waxaa ah 10 faa'iidooyinka ugu sarreeya ee budada NMN:
Effect Saamaynta Ka-hortagga Gabowga
♦ Wuxuu kordhiyaa taranka dumarka
Waxay hagaajisaa aragga & aragga
Boo Xoojiye tamar
♦ Wuxuu fududeeyaa hagaajinta xargaha DNA -da ee jabay
Waxay hagaajisaa shaqada kalyaha & socodka dhiigga
Waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka & triglycerides
Waxay hagaajisaa shaqada nidaamka difaaca jirka
♦ Wuxuu kor u qaadaa caafimaadka wadnaha & shaqada
Waxay hagaajisaa shaqada mitokondrial iyadoo la yareeyo neuroinflammation
Jawaabtu waa “dabcan maya”. Sababtoo ah NMN si dabiici ah ayaa looga helaa cuntooyin badan oo si fudud ayaad uga heli kartaa nolosheena. Hoos waxaa ah lixda cunto ee ugu sarreeya NMN:
Isku dar broccoli
Hadda, waa inaad ka fekertaa: "Haddii NMN laga helo cuntada, miyaanan kordhin karin heerarkeyga NAD+ anigoo cunaya inbadan cuntooyinkaas?" Taasi waa su'aal fiican. Si kastaba ha noqotee, waa inaan tilmaamaa haddii aad rabto inaad ku beddesho gabowga NMN, waa inaad cuntaa xaddi badan oo mid kasta oo ka mid ah cuntooyinkan. Nasiib darrose, NMN -da dhowr afko oo ka mid ah broccoli kuma filna inay xitaa bilaabaan inay kor u qaadaan heerarka NMN. Si kale haddii loo dhigo, si aad u hesho 1mg oo NMN ah, waa inaad cuntaa 1kg oo ah broccoli! Tani way ka sarraysaa waxa aan ka heli karno cuntooyinkayaga, si kasta oo broccoli aan cunno. Marka, waa inaan ka fikirnaa qaadashada budada NMN oo ah kaabisyada kahortagga gabowga nolosheena, waxay ka caawin kartaa jirkeenna inuu kordhiyo NAD+, la dagaallanka gabowga.
Su'aashii ugu dambeysay, waxaan ku xusnay Dr. David Sinclair oo qaatay 1g NMN maalin kasta. Kadib 1g ayaa noo ah qiyaasta ugu waxtarka badan si aan u helno faa'iidooyinka NMN, sax? "Xaqiiqdii maya!" Markaad ka shaqeyneyso inta aad u baahan tahay inaad qaadato, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso sida NMN loo maamulo iyo nooleheeda. Waxaa intaa dheer, jidh kala duwan oo leh falcelin kala duwan. Waxaan u baahanahay inaan soo saarno marka ay wanaagsan tahay in la qaato NMN, sida loo qaato iyo inta qiyaasood ee ay tahay inaan qaadno marka aad diyaar u tahay inaad qaadato budada NMN.
Aan ka hadalno su'aasha ugu horreysa: Sidee loo qaataa budada NMN?
NMN waxaa lagu maamulaa afar ikhtiyaar oo saamayn doona inta NMN dhab ahaantii ka dhigayso nidaamka dhiiggaaga: budada, budada sublingual, kaabsoolada caadiga ah, iyo kaabsoolada u adkaysta caloosha.
Si loo fahmo bioavailability, qofku waa inuu fahmaa Saamaynta Baasaboorka Koowaad (waxaa loola jeedaa inta walax ah ee uu baabbi'iyey ama ka baaraandegay beerka ka hor inta uusan si dhab ah ugu gudbin nidaamka dhiigga). Tani waa fikradda murugsan, waxaan filayaa in fiidiyowgani uu naga caawin karo inaan fahanno sida ay u shaqayso iyo sababta ay aad muhiim noogu tahay inaan ogaanno ka hor intaadan qaadan budada NMN. Sababtoo ah dheef-shiid kiimikaad-kii ugu horreeyay, isticmaalka afka ee NMN aad buu uga waxtar yar yahay kaabsoosha sublingual-ka ama caloosha u adkaysta. Marka budada NMN afka laga qaato (ama marka la cuno ama lagu qaso dareere) badideeda waxaa burburiya aashitada caloosha. NMN -ka soo haray ayaa markaa metabolized beerka. Sida beerka u metaboliyo NMN wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa bioavailability. Waxay noqon kartaa in qayb yar oo NMN ah ay dhab ahaantii ka dhigto nidaamkaaga. Sidoo kale si aad u hagaajiso heerarkaaga NAD+, waxaad ku qaadan kartaa kaabsoosha NMN ee dib-u-dhaca leh oo leh Sirtuin Activator sida Resveratrol leh yogurt dufan leh oo ka caawisa bioavailability Resveratrol.
Laakiin marka NMN (ama wax daawo ah ama kaabis ah) si hoose loo qaato, waxaa lagu nuugaa xuubka xabka (carrabka hoostiisa) oo wuxuu si toos ah ugu gudbaa dhiigga. Halkaas waxay si toos ah ugu socotaa maskaxda iyo xubnaha kale, iyada oo ka tallaabsata “saamaynta gudbinta koowaad” ee beerka. Waa sababtaas awgeed, waxaan aaminsanahay qaadashada NMN ee ku hadasha luqadda hoosaadka ama kaabsal u adkaysta caloosha ayaa ah tan ugu waxtarka badan uguna waxtarka badan. Waxaa laga yaabaa inay u baahato qiyaaso hoose marka loo eego qaadashada budada NMN ee afka ah ama foomka kaabsoolka caadiga ah.
Su'aasha xigta: Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee la qaadan karo budada NMN?
Gabowga waa cudur lagula dagaallami karo isku -darka habboon ee kaabsoosha iyo dabeecadaha, sida laga soo xigtay cilmi -baaris cusub oo ka socota Jaamacadda Waterloo. da'dooda. Qaar ka mid ah kaabayaasha ka hortagga gabowga waa inay qaataan dhallinyaradu habeenkii, halka dadka waaweyni ay tahay inay qaataan duhurka si waxtarkoodu ugu weyn yahay. saamayn ku yeelato jirkaaga, sida aad u gabowdo iyo sida aad u nooshahay, ”ayuu yiri Cilmi -baare Layton. “Dadku waa inay maanka ku hayaan markay wax cunayaan oo ay hubiyaan inay la jaanqaadaan waxyaabo kale oo deegaankooda ah oo saameeya wareegga hurdada/soo jeedkooda ama saacadda jirka.
Marka, marka ay tahay waqtiga ugu fiican ee la qaadan karo budada NMN? da'da ayaa ah qodobka ugu weyn ka hor intaadan go'aansan inta aan qaadanno budada NMN. Tusaale ahaan, waxaa la darsay in kaabayaasha NMN ay aad ugu faa'iideeyaan dadka dhallinyarta ah inay qaataan lix saacadood ka dib markay toosaan. Taa bedelkeeda, daraasaduhu waxay muujinayaan in kaabayaasha Resveratrol ay si fiican u shaqeeyaan haddii dhallinyaradu qaataan galabtii. Dadka qaangaarka ah, waxaa muhiim ah in la qaato kaabayaashan galabtii.
Su'aasha ugu dambeysa: Intee in le'eg ayay tahay inaan qaadno budada NMN?
Ka dib markaan akhrino su'aalaha kor ku xusan, waa inaan ogaano in qof kastaa u baahan yahay inuu helo qiyaas u gaar ah budada NMN, oo aan ahayn qaddar sax ah oo ku talin ah. Markaa sideen u xisaabin karnaa qiyaasta NMN nafteena? Sida daraasadihii ugu dambeeyay, waxay la xiriirtaa miisaankayaga. Laga soo bilaabo daraasadda: “Marka la eego in 100 mg/kg/maalin ee NMN ay awood u yeelatay inay yareyso inta badan hoos u dhaca jir ahaaneed ee jiirka, qiyaasta aagga u dhigma ee bini-aadamku waxay noqon doontaa ~ 8 mg/kg/maalin, taasoo siinaysa rajo ah in la turjumo natiijooyinka dadka. ” Sida laga soo xigtay qorayaasha daraasad cilmi -baaris oo dhowaan la sameeyay, waa in la qaataa ugu yaraan 8 mg oo ah NMN halkii kg ee culeyska jirka maalintii. Haddii daraasaddu sax tahay, markaa si aad u ogaato inta NMN ee aad u baahan tahay ugu yaraan, marka hore waxaad u baahan doontaa inaad miisaankaaga ku hesho kg, ka dibna ku dhufo 8. Tusaale ahaan, haddii miisaankaagu yahay 50kg, qiyaasta lagu taliyey waxay ku saabsan tahay 400mg.
Haddii aad qaadato kaabis tayo sare leh oo leh bioavailability aad u fiican, sida AASraw's Budada NMN, markaa waxaan ku talineynaa qiyaasaha soo socda ee ku saleysan jawaab celinta macmiilka:
Miisaanka Qiyaasta Tixraaca (maalin kasta)
Qiyaastani waa uun diidmo. Intee in leeg ayaad qaadanaysaa? Adiga ayay kugu xiran tahay. Laakiin haddii aad ku qanacdo daraasaddan gaarka ah, waxaa laga yaabaa inaad ku bilowdo xisaabintaada 8 mg halkii kg ee miisaanka jidhka maalintii.
Haddii aad tahay goobjooge fiican, waa inaad ogaatay in Dr. David Sinclair uu qaato dawooyinka ka hortagga gabowga maalin kasta, ma aha oo keliya budada NMN, sidoo kale waxay leeyihiin kuwo kale, sida resveratrol, metformin, iyo aspirin… oo leh budada NMN wada? Waayo?
Ku salaysan daraasadaha Dr. David Sinclair iyo kooxdiisaba, qaadashada budada NMN kaabayaal kale ayaa aad waxtar u leh ka hortagga gabowga. Hadda, waxaan la wadaagi doonaa 3 dheeri ah markaan qaadanno budada NMN. 2 kaabis ayaa ah resveratrol iyo pterostilbene. Resveratrol waa stilbenoid laga helo maqaarka canabka qadar yar. Daraasado ayaa muujiyey in resveratrol ay yareyn karto halista cudurka wadnaha, kansarka iyo neerfayaasha. Resveratrol ayaa loo baahan yahay si loo hawlgeliyo hidda -wadeyaasha sirtuin (oo ilaaliya DNA -da iyo epigenome -ka), halka NMN loo baahan yahay si loo sii shido sirtuins -ka Si kastaba ha ahaatee, resveratrol way adag tahay in mindhicirku nuugo, oo yaraanta resveratrol ee ku dhammaata jidhka waa jabtay Sidaa darteed, pterostilbene waa beddel ka fiican. Pterostilbene waa molecule aad ugu eg resveratrol, laakiin aad buu u nuugaa oo aad buu ugu xasilloon yahay jirka aadanaha.
Kaabis kale ayaa ah trimethylglycine (TMG), markaan qaadanno budada NMN muddo dheer, NMN waxay baabi'isaa kooxaha methyl ee jirkeena, taxaddar ahaan, waxaa loo maleynayaa inay muhiim tahay in la qaato TMG (amino acid loo yaqaan betaine) si loogu deeqo kooxaha methyl. Marka NMN loo rogo NAD+, waxaa la sameeyaa nicotinamide (NAM). Heerarka sare ee nicotinamide uma fiicna jidhkeena si si jidhkeenu uga takhaluso nicotinamide waxay u baahan tahay in lagu buufiyo N-methyl nicotinamide oo ka soo baxaysa kaadida. Si methylate NAM, jidh ahaan aragti ahaan wuxuu uga soo baxaa kaydadka kooxaha methyl. Aragtida ayaa ah in inta badan NMN ee aad qaadato, ay sii kordhayaan kooxaha methyl si looga takhaluso NAM.
In kasta oo inta badan kaabisyada lagu soo warramey inay yihiin kuwo badbaado leh oo waxtar u leh jidhkeenna, had iyo jeer waxaa fiican inaad la tashato takhtarkaaga daryeelka caafimaadka ka hor intaadan bilaabin qaadashada, gaar ahaan haddii aad leedahay xaalad caafimaad oo aad isticmaaleyso dawo joogto ah. Had iyo jeer raac qiyaasta lagu taliyey.
Jawaabta bilowga ah ee jirka ee hanjabaadda faafa sida COVID-19, oo loo yaqaan firfircoonida difaaca jirka, waxay kuxirantahay NAD+. Infekshannada fayraska ayaa baabi'iya NAD+ sababta oo ah caabuqyada ayaa kiciya isku -darka difaaca unugyada oo keena kororka NAD+ si looga hortago in fayrasku qabsado unugga. Si aad ah hoos ugu-fiirsashada NAD+ ayaa lagu muujiyey COVID-19 qaar ka mid ah cilmi-baarayaashu waxay u maleynayaan inay tani tahay qodobka ugu weyn ee sababta fayraskan u dilaa badan yahay, gaar ahaan kuwa kaydinta NAD+ ee gabaabsiga ah. Dr. Zhavoronkov wuxuu soo jeediyay in Tijaabinta rapamycin ee qadar yar shaqsi ahaan ama lagu daro metformin, iyo NAD+ dhiirrigeliyeyaasha sida nikotiinamide riboside (NR), ama nicotinamide mononucleotide (NMN) ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato sidii dadka waayeelka ah looga badbaadin lahaa cudurka gerolavic maanta sidoo kale waxay kor u qaadi kartaa soo kabashada dhaqaalaha marka masiibada adduunka ay dhammaato.
Intaa waxaa sii dheer, daraasado ayaa muujiyay in NAD+ ay kicin karto jawaabta nidaamka difaaca si jirka looga ilaaliyo coronavirus sida COVID-19. Dib-u-eegis la daabacay Maarso 23, 2020 ee Jaamacadda Isfahan ee Cilmiga Caafimaadka ayaa bixisa caddeyn ah in heerarka NAD+ ee hooseeya ay ku xirnaan karaan darnaanta sare iyo heerarka cudurrada faafa COVID-19. Marka loo eego tijaabooyinka caafimaad, kaabayaasha NMN waxay kor u qaadaan NAD+ heerarka dhalinyarada. Samaynta moodeelka NAD+ ee loo heli karo hidda -wadayaasha SIRT1 wuxuu kor u qaadaa awoodda ay u leeyihiin inay jirka ka difaacaan cudurrada iyo sii xumaanshaha. Maaddaama daraasado badan la sameynayo, cilmi -baarayaashu waxay ogaanayaan in NAD+ ay sidoo kale leedahay door muhiim ah inay ka ciyaarto nidaaminta nidaamyada difaacayaga.
Waxay sidoo kale ogaadeen in makrophages (nooc ka mid ah unugyada dhiigga cad oo cunaya kuwa soo duulaya sida bakteeriyada, fangaska, dulin, iyo fayrasyada) ay adeegsadaan waddo ay soo saartay NAD+ si loo hubiyo badbaadada unugyada iyo xakameynta caabuqa. Isku soo wada duuboo, daraasaduhu waxay tilmaamayaan in NMN iyo heerarka kordhay ee NAD+ ay ka ciyaari karaan door muhiim ah ka caawinta jirkeena la -dagaallanka caabuqyada iyo bakteeriyada. Si kale haddii loo dhigo, waxay awood u leedahay inay kor u qaaddo hab -dhiska difaacayaga oo ay caawiso xilliyada caabuqa iyo jirrada.
Daraasad kiis ayaa la daabacay Abriil 22, 2020 oo uu qoray Dr. Robert Huizenga MD oo ka tirsan Jaamacadda Chicago isagoo sharraxaya jawaabtii uu siiyay haweeney 55 jir ah oo cusbitaal la dhigay COVID-19 bishii Maarso 16. Xaaladeeda ayaa sii xumaatay maalintii 13 waxay lahayd oof-wareen cad, duufaan cytokine ah iyo hsCRP aad u sarreeya, oo ah calaamad barar oo aan gaar ahayn. Dr. Huizenga ayaa ku daaweeyay NMN afka ah, betaine iyo NaCl (oo loo yaqaan inay yareyso IL-6) wuxuuna sii waday daweyntii zinc ee horay loo siiyay. Maalintii 15 -aad, xummaddii waa la yareeyay oo astaamihiina aad bay u soo hagaageen. Maalintii 17 -aad ayaa la fasaxay si ay gurigeeda u aaddo. Maalintii 23, waxay ahayd asymptomatic. Laba bukaan oo kale oo waayeel ah ayaa lagu daweeyay isla “is biirsaday” labaduba waxay soo mareen soo kabasho la mid ah.
Nicotinamide mononucleotide (NMN) iyo nicotinamide riboside (NR) waa horjoogeyaal biosynthetic u ah molecule muhiim u ah dheef -shiid kiimikaad -nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). Kooxdan fosfooraska lagu daray ayaa NMN ka dhigaysa molecule ka weyn NR. NR (nicotinamide riboside) iyo NMN (nicotinamide mononucleotide) ayaa labaduba badanaa lagu tilmaamaa inay yihiin laba ka mid ah kaabayaasha ugu rajada badan si loo yareeyo gabowga. Qaadashada budada NR iyo NMN waxay kordhisaa heerarka NAD+ Heerarka sare ee NAD+ waxay ilaaliyaan epigenome -ka iyo DNA -ga. Kordhinta heerarka NAD+ waxay u horseedaa faa'iidooyin caafimaad oo badan xubnaha kala duwan, sida maskaxda, nidaamka wadnaha, iyo muruqyada.
Marka la eego in NR iyo NMN ay kordhiyaan heerarka NAD+, waxaa badanaa loogu yeeraa dhiirrigeliyaha NAD. Daraasado badan ayaa muujinaya in NR iyo NMN ay hagaajin karaan astaamaha kala duwan ee gabowga, sida epigenome-ka aan la xakamayn, waxyeellada DNA, isku-uruurinta borotiinka, bararka (bararka la xiriira gabowga) iyo hababka kale ee gabowga.
Laakiin su'aasha ugu weyn dabcan waa: keebaa fiican, budada NMN ama budada NR?
Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan daraasado isbarbar dhigaya NMN iyo NR oo ku saabsan saamaynta caafimaad iyo saamaynta nolosha. Aan isbarbar dhigno NMN iyo NR:
Waxaan aaminsanahay inaad heshay alaab -qeybiyeyaal badan markii aad gelisid “budada NMN” Google, si aadan u garan midka ugu fiican ama adiga kugu habboon. Waxaan u baahannahay inaan ogaanno waxa ay tahay inaan hubinno markaan la hadlayno alaab -qeybiyaha budada NMN. Si aan u xaliyo dhibaatadan, waxaan la hadlay alaab -qeybiyeyaal badan oo budada NMN ah khadka tooska ah una kala sooc liis tixraac:
（1 Invest Baaritaanka Aasaasiga ah
Waxaad u baahan tahay inaad ka eegto boggooda internetka ama dukaamadooda intarneedka, iska hubi inay yihiin alaab -qeybiyeyaasha aaminka ah, ee aysan khiyaameyn. U tag web -hayaha ama dukaamada, la hadal, weydii su'aalaha waxaad doonto. marka ay ka jawaabaan su'aalahaaga, waxaad dareemi kartaa inay tahay kalsooni, sidaan wada ognahay, daacadnimadu waa aasaaska wada shaqaynta oo dhan. Markaad weydiiso su'aalahooda, waxaad ka hadli kartaa dhinacyadan: Soosaarka budada NMM, shahaadada budada NMN, awoodda sahayda budada NMN….
(2)Dammaanad tayo leh
Budada ugu fiican ee NMN waxay yeelan doontaa 99% daahirnimo ama ka sareeya. Waxa kale oo aan ku jiri doonin wax buuxiya ama wax soo saarka sida GMOs, caanaha, ukunta, soy, gluten, kiimikooyinka macmalka ah, biraha culus, ama dareerayaasha loo isticmaalo ka shaqaynta dhabta ah ee alaabta. Inta badan budada been abuurka ah ee NMN waxay isticmaalaan buuxiyeyaasha ama kiciyeyaasha si ay u noqdaan inta ugu badan ee badeecada. Tani waxay suurtogal u tahay inay caafimaadkaaga halis weyn geliso maxaa yeelay ma garanaysid waxaad qaadanayso. Haddii aad NMN -kaaga ka iibsanayso shirkad iibisa kaliya kaabsoosha NMN, waxay noqon kartaa wax kasta.
(3)Dukumentiyada la Xiriira - Warbixinta Tijaabinta
Maaddaama ay tahay warshad budada NMN, dukumiintiyada la xiriira (COA, HPLC, HNMR, MS) ayaa soo bixi doona ka dib markay soo saaraan badeecooyin dufcad ah, waxay u baahan yihiin inay hubiyaan tayadeeda, u diraan shaybaarrada 3-aad si ay u sameeyaan imtixaan (tan waxaa ka mid ah nadaafad, wasakh, iyo biraha culus) Waxaad ka hubin kartaa websaydhka alaab-qeybiyaha macluumaadka imtixaanka dhinac saddexaad, ama si toos ah ula xiriir adeeggooda macmiilka. Xaqiijinta tijaabada dhinac saddexaad waa hab fudud oo lagu hubiyo inaad ka iibsanayso ilo sumcad leh. Shirkad kasta oo adeegsanaysa tijaabada dhinac saddexaad waa inay ku faraxsan tahay inay kula wadaagto macluumaadkaas.
(4)Isbarbardhig Qiimaha u dhexeeya Dhowr Alaab -qeybiye
Qiimaha NMN waa cabbir kale oo aad u adeegsan karto inaad ku cabirto ku -habboonaanta alaab -qeybiyaha, adoo hubinaya tiro ka mid ah alaab -qeybiyeyaasha NMN budo iyo kaabsal labadaba waxaad heli doontaa fikrad ah qiimaha celceliska garaamkiiba. iska ilaali budada been abuurka ah ee NMN, ama alaab tayo hoose leh. Had iyo jeer waa jirrabo inaad rabto inaad lacag ku badbaadiso fursad kasta oo aad awooddo, laakiin NMN gaar ahaan, waxaad heleysaa waxaad bixiso. Qiimaha jaban ee NMN waxay u badan tahay inuu ahaado cunto, ma aha darajada daawada, taas oo macnaheedu yahay faa'iidooyinka NMN isku mid ma aha Dhab ahaantii, mararka qaarkood waxaa jira wax ka yar 10% NMN oo ku jira NMN-heer-cunto. Si tan loo tijaabiyo, waxaan helnay darajo cunto Muunadda NMN Tijaabinta miisaaniyaddaada waa muhiim, laakiin waxaa laga yaabaa inaad ku dambayso lacag badan mustaqbalka fog markaad dooranayso alaabada NMN ee qiimahoodu hooseeyo haddii aadan ka arag wax faa'iidooyin caafimaad ah.
(5)Adeeg Macaamiisha Sare
Tayada NMN waxay ka timaaddaa alaab -qeybiyeyaasha tayada leh, alaab -qeybiyuhu waa inuu lahaadaa adeeg macmiil oo aad u fiican. Markaad la hadasho macmiilka wax u sheega, u dir dhammaan su'aalaha iyaga oo si dhaqso leh kuugu jawaabi doona. Intaa waxaa dheer, ku ogeysii habka wax iibsiga oo dhan, sida loo sameeyo oo laguu sheego waxa ay tahay inaad sameyso tallaabada xigta, habka oo dhan naftaada ha lagu dabagalo. Fadlan xusuusnow in adeegga macmiilku wanaagsan yahay qof dareemaya inuu si fiican ula xiriiro waqti kasta.
(6)Faallooyinka Macaamiisha Kale
Guud ahaan, waxaan ka heli karnaa xoogaa dib -u -eegis ku saabsan shirkaddaas haddii shirkad ay bixisay budada NMN muddo dheer, ama waxay siin karaan xoogaa jawaab celin ah macaamiisha kale. Ka dib oo dhan, waxaan ogaan karnaa inay run tahay inta ay haystaan ​​diiwaanka iibka iyo jawaab celinta dhabta ah ee macaamiisha. Dabcan, waa inaan ogaannaa in dib -u -eegista laga helo macaamiisha kale oo keliya tixraac ahaan markaan go'aansanno inaan iibsanno budada NMN, adiga ayay ku xiran tahay ugu dambeyn.
AASraw waa shirkadda leh warshad shahaado siisay, waxay u soo saari kartaa buluugga NMN iyo waxyaabaha kale ee ka hortagga gabowga, sahaydu waa mid deggan. Waxaad tagtaa degelkooda-www.aasraw.com waqti kasta oo weydii adeegooda macmiilka, weydii shahaadada tayada iyo warbixinnada imtixaanka 3rd-lab, xaqiiji in budada NMN ay tahay 99% fasalka dawooyinka daahirka ah waana kan ugu sarreeya. Ilaa inta aan ogahay, waxay soo diri karaan badeecada aad dalbatay 1-3 maalmood oo shaqo, xitaa 12 saacadood kadib marka la xaqiijiyo amarka, hufnaanta shaqadu aad ayay u sarraysaa, waa inaan taas suulka siiyaa. Waxaad ka heli doontaa sawirka budada NMN iyo nambarka raadinta iyaga amar kadib, markaa waxaad u adeegsan kartaa raadinta baakadda khadka tooska ah oo aad ogaataa meesha ay tahay, inta ka fog gurigaaga. Baro wax badan oo ku saabsan AASraw hadda
Ot Nicotinamide Mononucleotide
Nicotinamide riboside (NR) iyo nicotinamide mononucleotide (NMN), ayaa lagu muujiyey inay wanaajinayaan cudurrada da'da la xiriira ee xoolaha. Waxay si fiican ugu dulqaadan karaan qiyaaso aad u sarreeya waxayna si wax ku ool ah kor ugu qaadaan heerarka NAD+. Moleekuleyaashani ma aha kuwo ku-xeel-dheer heerkulka sare ama xaaladaha huurka badan, si kastaba ha ahaatee. Waxay si deg -deg ah ugu milmaan nicotinamide, taas oo horjoogsata hawsha sirtuins iyo PARP, enzyme dayactir DNA ah. Budada NMN ee aan la nuugin bilaha 3 ama ka badan ayaa laga yaabaa in la qaboojiyo si loo hubiyo inay sii haystaan ​​awood buuxda. Hoggaamiyaha adduunka oo dhan, AASraw wuxuu had iyo jeer bixiyaa tayada ugu sarreysa oo ugu waxtarka badan NAD+ iyo budada NMN ee la heli karo.
Tom oo ka yimid UK: Aniga iyo xaaskeyga waxaan biloownay qaadashada budada NMN dhowr bilood ka hor waana yaabnay waxaan joojiyay khuurada iyo dhibaatooyinka maqaarka ee xaaskeyga ayaa bilaabay inay yaraadaan! Waxaan kaliya dareemeynaa caddeyn ka sii wanaagsan oo maanka sidoo kale ah tamar badan, waligey ma qaadin kaabis aan ku yeeshay falcelin la dareemi karo waxaan ula jeedaa inaad qaadatid fiitamiinno badan iyo kaabis geedo laakiin runtii ma dareemaysid natiijooyinka! Kani waa kaabayaashii ugu yaabka badnaa ee nin noociisa ah oo la ogaaday oo kaliya suurtogalnimada dib u soo celinta malaayiin unug oo ku jira jirka bini'aadamka waa daahfurka layaabka leh ee geedi socodka gabowga! Waxaan u malaynayaa in qof walba uu ogaan doono kaniinigaan mustaqbalka dhow iyo baaritaanka kansarka sidoo kale wuxuu ogaan doonaa, waxaan ku jirnaa 50 jir mana dhihi karno wax ku filan sida aan u kala duwan nahay! Yaa aan doonayn inuu dareemo caafimaad isagoo ku daraya tan qaadashada ka-hortagga gabowga ayaa noloshaada u beddeli doonta si wanaagsan ii aamin !!!
liMei oo ka socda Shiinaha: Waxaan doortay budada NMN maxaa yeelay waxaan akhriyay waxay ka caawisaa oksijiinta dhiigga waxayna gaarsiisaa oksijiin unugyada jidhkayga. Jidhkaygu wuxuu ku baaqayay badeecadan, waxaan dareemayay daal iyo inaan awoodin inaan diirada saaro. waxaan ahaa qaadashada budada NMN muddo laba toddobaad ah hadda. Waxaan arkay koror xagga tamarta ah, waxaan awoodaa inaan ka qaybqaato barnaamijka jimicsiga wadnaha oo xooggan kadib markaan shaqeeyo maalintii oo dhan. Fekerkaygu waa cad yahay, shirarka kuma dareemayo hurdo. Aad ayaan ugu faraxsanahay kaabayaasha NMN Waxaan helayaa natiijooyinkii aan raadinayay. Intaa waxaa sii dheer, waa inaan dhahaa: Qiimaha NMN wuu iga yara sarreeyaa laakiin waxaan rabaa inaan ku adkeysto inaan qaato, maxaa yeelay waxaan rabaa inaan ka yaraado, haha…
Gary oo ka socda Australia: Kani waa ka-hortag gabow oo weyn. Waxaan ogaaday tamar korodhay, ma qabin qabowga 4 jirkayga, si fududna uma daalin. Nooca tamarta aan dareemayo way ka duwan tahay kafeyn sare. Ma dareemayo welwel ama xoog-u-kicis, runtii waa feejignaan iyo cusub. In kasta oo ay feejignaan jirto, hurdadaydu way soo hagaagtay. Waligey dhibaato iguma qabin hurdada, laakiin aad baan u toosaa habeenkii. Iyada oo leh budada NMN waxaan seexanayaa waqti dheer. Waxaan u malaynayaa in NMN ay siyaabo badan iiga faa'iidayso oo aanan si fiican ugu hadli karin.
Steven oo ka socda USA: Ka dib markii aan bartay budada NMN iyo saamaynta ay ku yeelan karto Daraasadda Harvard ee uu sameeyay Dr. David Sinclair, waxaan go'aansaday inaan tijaabiyo. Laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee aan isku dayay, waxaan dareemay farqi u dhexeeya heerka tamartayda. Waxaan ahay 57 jir, dheef -shiid kiimikadayduna waxay u muuqataa inay si ka sii wanaagsan isu beddelayso. Ma aanan beddelin caadooyinkeyga cuntada, haddana waxaan luminayaa miisaan, 14 rodol 4 toddobaad gudahood. Wakhtigaas ayaa tilmaamaya khasaare joogto ah. Xaaskeygu waxay lumisay 9 rodol, waxayna la ildaran tahay cudur dhif ah oo la yiraahdo Erythromelalgia, kaasoo sababa in xagjirku aad ugu kululaadaan xanuunka neuropathic, waana mid joogto ah. Qeybta Niacin ee xarunta, marka laga reebo daawooyinkeeda, ayaa xanuunka yareysay waxoogaa, waxayna awood u siisay waxqabad badan. Ka dib markii aan ka baxay markii ugu horeysay - Waxaan isku dayay mid ka mid ah bixiyeyaasha kale ee budada NMN. Isku -dhafkeedu wuu ka duwan yahay, oo tamartii way baaba'day. Taasi waa sababta aan ugu soo laabtay MAAC10, haddana waxaan ku soo noqday wadadii. Waad ogtahay, xitaa waxaan aaminsanahay in qaar ka mid ah timahaygii cawlan ee baahsanaa ay madoobaadeen iyada oo aan dheeh lahayn. Way shaqeysaa Waad ogtahay-Uma maleynayo inaan mar dambe fiiriyo 57 Midna, waad ku mahadsan tahay mucjisadan dheellitirka-budada NMN oo ku mahadsan aasraw.
In kasta oo Isha Dhallinyaradu ay weli tahay khuraafaad fantastik ah oo aan u badnayn inay rumowdo waqti dhow, haddana sayniska ka dambeeya dawooyinka ka hortagga gabowga ayaa sii socda. Waxaa laga yaabaa in maalin maalmaha ka mid ah, waxaad awoodi doontaa inaad qaadato kaniiniga mucjisada ah oo aad mar kale la kulanto nolosha sidii qof weyn oo da 'yar. Daraasadaha ku saabsan xayawaanka ayaa muujiyey astaamaha NMN ee rajada leh ee NAD+-buuxinta iyo ka-hortagga gabowga. Hadda, In kasta oo cilmi -baarayaashu ay hore ugu socdaan tijaabooyin caafimaad si ay u baaraan amniga iyo wax -ku -oolnimada moodeelka ee aadanaha. Dheeraadka NAD iyo NMN bixiyaan faa'iidooyin dhab ah si loo yareeyo saamaynta ba'an ee gabowga unuggu ku leeyahay jidhka bini'aadamka. Waxaan aaminsanahay inay waxtar yeelan doonto marba haddii ay waxtar u leeyihiin jirkeenna, Aan mar kale dhallaan isu keenno.
 Waqooyiga, BJ, Rosenberg, MA, Jeganathan, KB, Hafner, AV, Michan, S., Dai, J.,… & van Deursen, JM (2014). SIRT2 waxay kicisaa barta kontoroolka kinase BubR1 si loo kordhiyo cimriga. Wargeyska EMBO, e201386907.
 Kiss, T., Nyúl-Tóth, Á., Balasubramanian, P., Tarantini, S., Ahire, C., Yabluchanskiy, A.,… & Ungvari, Z. (2020). Kaabista Nicotinamide mononucleotide (NMN) waxay kor u qaadeysaa dib-u-nooleynta neerfaha ee jiirarka da'da ah: raad-raaca qoraalka ee firfircoonaanta SIRT1, ilaalinta mitokondrial, anti-bararka, iyo saamaynta anti-apoptotic. GeroScience, 1-20.
 Grozio, A., Mills, KF, Yoshino, J., Bruzzone, S., Sociali, G., Tokizane, K.,… & Imai, SI (2019). Slc12a8 waa nicotinamide mononucleotide. Dheef-shiid kiimikaad dabiici ah, 1 (1), 47-57.
 Li, J., Bonkowski, MS, Moniot, S., Zhang, D., Hubbard, BP, Ling, AJ,… & Sinclair, DA (2017). Jeebka xirashada NAD+ ee xukuma oo nidaamiya is-dhexgalka borotiinka-borotiinka inta lagu jiro gabowga. Sayniska, 355 (6331), 1312-1317.
 Stipp D. Beyond Resveratrol: Ka-hortagga Gabowga NAD Fad. Shabakadda Barashada Ameerika ee Sayniska ah. Maarso 11, 2015.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC. + Hoos u dhig. Dheef -shiid kiimikaad. May 2018, 27 (5): 1081–1095.e10. PMC 5935140. PMID 29719225. doi: 10.1016/j.cmet.2018.03.016.
 Bogan KL, Brenner C. Nicotinic acid, nicotinamide, iyo nicotinamide riboside: qiimaynta molecular ee NAD+ fiitamiinada horudhaca ah ee nafaqada aadanaha. Dib -u -eegista Sannadlaha ah ee Nafaqada. 2008, 28: 115–30. PMID 18429699.
 Fletcher RS, Lavery GG (Oktoobar 2018). Soo bixitaanka nicotinamide riboside kinases ee qawaaniinta NAD+ dheef -shiid kiimikaadka. Wargeyska Endocrinology Molecular. 61 (3): R107 –R121. doi: 10.1530/JME-18-0085. PMC 6145238. PMID 30307159.
Top 15 Winstrol Waxtarrada Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Inta Aan Laga Helin Winstrol Online
7 daroog ee ugu sareeya ee lagu daweeyo kansarka sanbabka - oo ay ansaxisay FDA Kaabka Kobciyaha Murqaha ugu Badbaadsan: Urolithin A (UA) Budada